YOPE | YOPE
Home \_ Author YOPE
RED CHAIR meets Chan Chan
YOPE | Red Chair |0Comments
ဒီနေ့အတွက် YOPE RED CHAIR မှာ တေးသံရှင် အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ အားပေးပါဦးနော်….
Why Do People Not Care About Zebra Crossing?
YOPE | Brave Voices |0Comments
မျဉ်းကြားကို ဘာလို့ ဂရုမစိုက်ကြတာလဲ? လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုဟာ ယာဉ်တိုက်မှုအားလုံးရဲ့ ၉၅% ရှိတာကို သိပါသလား။
Does Myanmar culture still has dominate the Myanmar girl ?
YOPE | Brave Voices | 1 Comment
မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဟာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်စရာပါ။ဒီတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ကကော မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဘယ်လောက်ထိ လွှမ်းမိုးခံနေကြလဲ? သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ အဖြေတွေကို အခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မျှဝေလိုက်ကြရအောင်..
YOPE | Yope Stories |0Comments
ပန့်ခ်က ဂီတအမျိုးအစားတစ်ခုတင်မကပဲ ဘဝနေထိုင်မှုကိုပါ လမ်းညွှန်နိုင်တယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတို့လက်ခံနိုင်မလား? မြန်မာနိုင်ငံက ပန့်ခ်လူငယ်တစ်စုကတော့ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကို ပန့်ခ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းပဲနေထိုင်နေကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ……….?
Where did you waste your time ?
YOPE | Crazy Stuff |0Comments
YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ. ဒီနေ့ Crazy stuff အစီအစဉ်မှာ “အချိန်ဖြုန်းစရာနေရာများ” ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့နေရာတွေကကော ဘယ်နေရာတွေဖြစ်မလဲ.. တခြားသူငယ်ချင်းတွေကိုပါ သိခွင့်ပေးလိုက်ပါနော်..
Is your daily income enough?
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီတစ်ပတ်အတွက် Brave Voice အစီအစဉ်အတွက် မေးခွန်းကတော့ ” တစ်နေ့တာ ၀င်ငွေက လုံလောက်မှုရှိရဲ့လား” ဆိုတာဘဲဖြစ်ပါတယ်. လူငယ်တွေကြားထဲ လိုက်မေးထားတဲ့ အဖြေတွေကိုတော့ video မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်. သူငယ်ချင်းတို့ကော ကိုယ့်ရဲ့ ၀င်ငွေက တစ်နေ့တာ အသုံးစရိတ်ကို လုံလောက်ရဲ့လား…?
Does Yangon need to have street seller or not ?
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒီနေ့ True Story ကတော့ ထူးခြားပါတယ်… ရန်ကုန်မြို့အနှံ့တွေ့နေရတတ်တဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေနဲ့ ရန်ကုန် မြို့သူမြို့သားများရဲ့အမြင်ကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ကကော .ဘယ်လိုမြင်လဲ …
How to dance!
YOPE | Yope Tips |0Comments
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့ Insider Tips အစီအစဉ်အတွက် ကနည်းလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်. တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ထွက်ပေါက်အဖြစ် ကပေးမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းသလို စိတ်မှာလည်း ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ကနေကျ ပုံစံတွေရှိရင် တခြားသူငယ်ချင်းတွေအတွက် မျှဝေပေးပါဦးနော်..